Ahoana no hahalalana raha manintona ianao: Famantarana 10 no tadiavina - Fifandraisana
Raha mamaky an'ity ianao dia misy vintana lehibe mety ho anao aza mieritreritra ianao manintona…
… Ka andao hanomboka amin'ny filazana izany Ny olon-drehetra manintona!
Misy fomba maro samihafa hanintonana, ary zavatra maro samihafa izay ahitan'ny olona samy hafa manintona.
Maniry ny sipan'ny namako akaiky indrindra ve aho? Tsia mihitsy.
Mety hampiaraka amin'ny sipako ve izy? Tsy misy kisendrasendra.
Ary na izany aza, dia samy manintona be an'ireo mpiara-miasa aminay izahay.
Ny olon-drehetra dia miditra amin'ny zavatra hafa ary olona (olona marobe!) Dia ho tonga ao aminao.
Ireto misy zavatra azonao jerena mba hampisehoana fa manintona ianao, saingy ity lisitra ity dia sady tsy feno no tsy tanteraka. Raha tsy manisy marika ny entana rehetra amin'ity lisitra ity ianao dia tsy midika hoe tsy mahasarika ianao!
1. Matetika ianao no mahazo dera.
Ity dia fotokevitra tsara tarehy iray voalohany, fa raha matetika ny olona milaza aminao ny hatsaranao, ny fahaizanao tsara ary ny mahaliana anao dia mahomby amin'ny fiainana ianao!
Ny olona dia te hampahafantatra anao ny mahasarika anao satria tiany ho fantatrao, ary te hampody anao ho tsara. Ny sasany angamba manandrana milalao aminao ...
2. Mahalana ianao no mahazo dera.
Ie - ny mifanohitra tanteraka amin'izany! Indraindray, ny olona manintona dia tsy mahazo dera fotsiny.
Raha mifanerasera amina olona manintona anao ianao ary mahatalanjona izy ireo isaky ny segondra, dia somary hafahafa ihany ny ilazanao azy isaky ny 5 segondra.
Toy izany koa, indraindray ny olona manintona dia tsy mahazo dera firy satria mihevitra ny rehetra fa efa fantany fa tsara izy ireo na mafana - inona no antony ilazana zavatra momba ny tenany amin'ny olona iray izay miharihary ?!
3. Manadala anao ny olona ary manasa anao handeha.
Angamba ny olona mangataka anao matetika amin'ny daty ary mangataka ny nomeraonao, na mikapoka anao fotsiny amin'ny alina any ivelany.
Ity dia famantarana mazava tsara fa nahasarika anao izy ireo ary, noho izany, manintona ianao!
Tsarovy fa samy manana ny karazany hafa ny tsirairay ary samy manintona amin'ny fombany avy ny tsirairay, noho izany satria tsy voadona isaky ny mandao ny trano ianao dia tsy midika izany fa tsy mahasarika anao.
4. Efa niaraka tamin'ny daty ianao.
Raha efa nanao daty ianao (na dia iray monja aza!), Dia nisy olona iray mazava ho liana taminao mba te hahafantatra anao bebe kokoa.
Na dia tsy nandeha tamim-pahagagana aza ny daty, dia nahasarika anao izy ireo noho ny antony iray ary nisafidy ny handany fotoana miaraka aminao raha afaka nanao zavatra hafa izy ireo.
Raha nisafidy ny tsy hahita anao foana izy ireo dia tsy midika hoe tsy mahasarika ianao, koa ezaha tsy raisina ho fandavana izany. Mety ho fotoan-tsarotra fotsiny izany, mety tsy dia tsara loatra, na mety tsy ho liana amin'ny fanenjehana azy ireo bebe kokoa izy ireo.
5. Nifanao fotoana na nifanao fiarahana ianao.
Raha efa ‘nahita’ olona iray ianao, niara-nanao daty tamina olona iray ihany, na efa nanao fiarahana dia mazava ho azy fa manintona ianao!
Tsy misy mandany fotoana be amin'ny olona iray raha tsy hoe misafidy izy ireo, ary misafidy ny hiaraka aminao noho ny antony.
Raha efa natory tamina olona iray ianao, na nifandray akaiky tamina olon-tianao fotsiny dia mazava ho azy fa maniry anao izy ireo ary mahita fa manintona anao.
6. Manana resaka mahafinaritra amin'ny olona ianao.
Aleo tadidio fa ny hoe manintona dia tsy ny fisehoantsika ivelany fotsiny! Azo antoka fa fomba tsara hanombohana amin'ny voalohany, saingy misy zavatra betsaka kokoa manintona noho ny mijery ilay ampahany fotsiny.
Raha hitanao fa manana resadresaka mahafinaritra ianao, manana banter mahatalanjona, ary angamba mety hahazo hadalana sy mikorontana aza, tsy vitan'ny hoe orinasa lehibe ianao - manintona anao koa!
7. Ankafizin'ny olona ny mandany fotoana miaraka aminao ary te hiaraka.
Raha manintona anao ny olona ary te handany fotoana miaraka aminao tsy tapaka, manintona ianao.
iza no dan sy phil
Misy zavatra momba anao misarika ny olona hiditra ao ary mahatonga azy ireo te ho eo akaikinao. Mety ho ny fijerinao, ny fahatsapanao hatsikana, na ny herinao - na inona izany na inona, raha te-ho eo akaikinao ny olona noho izany dia azo antoka fa manintona ianao!
Averina indray, ny olona rehetra dia manintona amin'ny fombany avy, ka na dia tsy hitanao aza ny tenanao, ireo olona mitady anao ary te handany fotoana miaraka aminao dia mahita izany ary mino azy.
Miezaha hino an'io ary fantaro fa te-ho eo akaikinao ny olona, ​​na dia sarotra aza izany tamin'ny voalohany!
8. Mijery anao ny olona.
Angamba ianao mijery be eny amin'ny arabe, na maka indroa ny olona rehefa mandalo anao ao anaty bar izy ireo.
Mazava ho azy, raha mahazo aina amin'izany ianao dia afaka mahatsapa mahafinaritra ity ary fanamafisana fahatokisana tsara izay ahafahanao mahafantatra fa mahasarika anao ny olona.
Mety mifototra amin'ny endrikao fotsiny izany, ary koa amin'ny tsirony manokana. Eritrereto ny fisalasalanao raha ny momba ny nofinofisinao, ary aza sosotra raha tsy mifanandrify amin'ny 'hevitra tonga lafatra' an'ny olona iray ianao!
9. Gaga ny olona fa saro-kenatra ianao.
Efa niara-niasa tamin'ny namanao ve ianao ary naheno azy ireo nitaraina fa matavy izy, manana hoditra ratsy, manana baoty kely loatra na tsy tongotra be hozatra?
Amin'ny maha-olona tia azy ireo ary mieritreritra fa izy ireo dia iray amin'ireo olona tsara indrindra eto an-tany, dia mety ho gaga anao tanteraka mandre azy ireo miresaka ratsy momba ny tenany.
Rehefa dinihina tokoa, heverinao fa tsara tarehy / mahavariana / tsara fanahy / mahatsikaiky izy ireo, ahoana no hahitan'izy ireo, na olon-kafa izany?
Eny, izany koa no mihatra aminao. Raha gaga na taitra ny olona rehefa miteny aminy ianao fa saro-kenatra na mieritreritra tsy mahasarika olona dia satria mahita ianareo mamirapiratra ary tsy afaka an-tsaina ny fomba tsy ahitanao izany ho an'ny tenanao.
Toy izany koa, raha gaga ny olona fa mpitovo ianao, dia angamba satria mahita anao manintona izy ireo ary noho izany dia mihevitra fa ny olon-kafa koa manao an'izany!
10. Miova manodidina anao ny olona.
Efa teo daholo izahay - mahita olona manintona ianao ary somary mihomehy, na mihodina saro-kenatra ary manomboka mikorontana, na angamba manomboka milalao ny volonao sy milalao.
Raha tsikaritrareo fa miova manodidina anao ny fihetsiky ny olona dia mety satria hitan'izy ireo fa manintona ianao.
Mety tena miraharaha ny hevitrao izy ireo ary noho izany somary mitebiteby sy te hampiaiky volana anao, na mety hivoaka izy rehetra ary hanala baraka, OTT, ary hanandrana hisarika ny sainao.
Na izany na tsy izany, raha miova fitondran-tena matetika ny olona rehefa eo ianao, dia satria mahita anao manintona izy ireo ary maniry anao ho tsikaritr'izy ireo.
ahoana ny fitiavam-po amin'ny zavatra iray
Teny iray mahasarika.
Ireto misy zavatra vitsivitsy mety hanondro ny mahasarika olona sasany mahita anao.
Raha mbola tsy niainanao ny zava-drehetra tamin'ity lisitra ity (na zavatra hafa, noho izany), dia tsy mahasarika anao mihitsy izany!
Ny sasany amintsika dia tena mihevitra tena fa tsy tsikaritray akory rehefa misy olona mijery antsika na mijery antsika. Tena voafandrika ao an-tsaintsika manokana isika hoe 'Tsy manintona aho, tena mamely ny namako izy ireo fa tsy izaho,' ka saika jamba amin'ireo olona tena manintona antsika isika.
Manilika ny sain'ny olona izahay satria efa zatra mieritreritra fa tsy tena izy io. Na dia somary ara-dalàna aza izany dia tsy ny fihetsika mahasalama indrindra momba ny tenantsika!
Raha sahirana amin'ny sarin'ny vatanao na ny bika aman'endrinao ianao, dia ilaina ny miresaka amin'ny matihanina. Indraindray, mila olona kendrena isika hanampy antsika hiasa amin'ny alàlan'ny eritreritsika sy hitady ny anton'ireo ‘finoana’ sy fitantarana ambarantsika amin'ny tenantsika.
Angamba ianao nolavin'ny olona taona maro lasa izay ary izao dia mieritreritra avy hatrany fa tsy hisy hahita anao manintona intsony.
Angamba ianao mihevitra fa ny olona miresaka aminao dia manao izany mba hanakaikezana ny namanao, ary noho izany dia manosika azy ireo hiala amin'ny tena hamely anao satria mahatsapa izy ireo fa ianao nanda azy ireo amin'ny tsy firaharahana azy ireo!
Mety ho hafahafa izany, saingy ny fihetsika efa raiki-pitia amintsika izay avy amin'ny fahatsapana ho tsy mahasarika taona maro dia mety hahatonga antsika manao ny tenantsika dia mahita fa tsy mahasarika, tsy mahalala fomba, na tsy mahalala fomba.
Tsy ianao velively no diso fa zavatra tokony ho ao an-tsaina izany! Ny firesahana amin'ny olona manampahaizana manokana amin'ny fanampiana olona tsy matoky tena sy matoky tena dia afaka miasa zava-mahatalanjona, ary hanampy anao hahatsapa fa tena tsy mampino sy manokana ianao.
Ary tadidio fa ny tombambaranao dia tsy miankina amin'ny fahitan'ny olon-kafa anao, ary ny fifandraisan'ny fifandraisanao dia tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny fahatsapanao ny tenanao amin'ny ambaratonga lehibe na maharitra!
Ny sasany amin'ireo olona manintona indrindra manerantany dia mbola mpitovo tamin'ny fotoana iray tamin'ny fiainany - Google fotsiny ilay olo-malaza tianao ary ho tsapanao fa mpitovo izy ireo, nolavin'ny olona tiany izy ireo, ary izy ireo efa nariana tamin'ny fotoana iray!
Ny fijerintsika sy ny isan'ny olon-kafa maniry antsika tsy izy rehetra ary mifarana rehetra, koa tadidio ny manome lanja ny tenanao amin'ny maha-ianao anao, fa tsy izay mahita anao manintona fotsiny.
ahoana no itokisanao ny olona iray amin'ny fiarahana
famantarana ny mahalala izany rehetra izany
inona ny fetra tsara eo amin'ny fifandraisana
azafady indrindra noho ny fahavoazanao